उर्जा क्षेत्र सहयोग सम्बन्धी नेपाल–भारत संयुक्त भिजनमा के छ? - Dainik Online Dainik Online
उर्जा क्षेत्र सहयोग सम्बन्धी नेपाल–भारत संयुक्त भिजनमा के छ?
प्रकाशित मिति : १९ चैत्र २०७८, शनिबार ७ : ४८
काठमाडौंl नेपाल र भारतले शनिबार ऊर्जा क्षेत्र सहयोग सम्बन्धी ‘भारत–नेपाल संयुक्त भिजन’ जारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको समयमा नयाँदिल्लीबाट उक्त भिजन जारी गरिएको हो । जारी गरेपछि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले भारत–नेपाल संयुक्त भिजनलाई उर्जा क्षेत्रको ठूलो उपलब्धी बताएका थिए । भिजनमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले केही बुँदामा सहमती जनाएका छन् ।